Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Oktobra 2018 à 14:22
15 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Martsa 2018 à 12:14 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 25 Oktobra 2018 à 14:22 (hanova) (esory)
== FihalatraFanasokajiana ==
Teny ofisialin'ny [[Katolisisma|Fiangonana Katolika]] ny fiteny latina. Ny fiteny frantsay no tenin'ny diplômasia any Vatikana, fa ny fiteny italiana no tena apiasaina any amin'ny [[firenena]] vatikanina.
Ny teny romana (toy ny fiteny espaniola, ny fiten'ny Oïl sy ny [[fiteny frantsay]], ny fiteny italiana, ny fitenin'ny Oc, ny katalanakatalàna, ny [[Fiteny portogey|portogey]], ny romantsa ary ny romaina) dia voasintonanivoatra avy amin'ny fiteny latina.
Karazana fandravonana ireo fiteny romana ireo ny interlingua, izay afaka azon'ny olona 900 tapitrisa (tontalin'ny mpiteny fiteny romana) avy hatrany io fiteny io.
Ny romanaRomana no namorona ny [[abidy latina]]. Ireto ireo ny litera ampiasain'ny abidy latina:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/915508"